ကောင်းနိုးရာရာ Computer Science Knowledge Video များ — MYSTERY ZILLION
ကောင်းနိုးရာရာ Computer Science Knowledge Video များ
November 2011 edited November 2011 in Programming
Programming စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက် အောက်မှာပြထားတဲ့ Playlist တစ်ခုကို ကြည့်ဖို့အကြံပြုချင်တယ်။ Programming Paradigms အကြောင်းရှင်းပြထားတယ်။ High Level ကနေ Low Level ဆက်စပ်တာတွေကို အသေအချာရှင်းပြထားတယ် အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ အပိုင်း ၂၇ ပိုင်းရှိပါတယ် အကုန်လုံးနားထောင်နိုင်ရင် ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ Anime ကြည့်တာလည်း ကြည့်ပေါ့လေ အဲဒါထက်တော့ အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ :P
wow... added in my watch later
November 2011 edited November 2011 Moderators
Anime ကြည့်တာလည်း ကြည့်ပေါ့လေ အဲဒါထက်တော့ အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ :P
Download ဆွဲပြီဆရာ . . . Streaming ကြည့်လို့မရလို့။
Anime တစ်ပိုင်း Lecture တစ်ပိုင်းပေါ့ ဟုတ်ဖူးလား :P
@K already downloaded ??? if u do, i'll grab from u
လောဘကြီးသလိုပဲ။ ရှိပြီးသား ScreenCast တွေကောကြည့်ပြီးလို့လားဗျာ :P
Already finished yesterday.
Here's the whole series of Programming Paradigms (Stanford). Some files are bigger than 100MB with 380P. O_O
<a href="http://www.youtube.com/results?search_query=Programming+Paradigms+(Stanford)&amp;aq=f&quot;&gt;Programming Paradigms (Stanford)</a>
@Morris how about you ?
ခေါင်းစဉ်ကို နည်းနည်းနာမည် ပြောင်းလိုက်မှထင်တယ် Video တစ်ခုတွေ့တိုင်း Thread တစ်ခုဆိုရင် ပွစိတက်ကုန်မယ်။ "ကောင်းနိုးရာရာ Computer Science Knowledge Video များ" လို့ပြောင်းလိုက်မယ်။ နောက်ထပ်တွေ့တဲ့ဟာတွေ ဒီအထဲပဲထပ်ရေးကြတာပေါ့။
ရှေးတုံးက ကွန်ပျူတာဆိုတာ ဘယ်လိုဆိုတာကို ဗဟုသုတရအောင် ကြည့်ကြပါဦးလား PDP-11 စက်မှာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ် ပရိုဂရမ်ဘယ်လိုရေးပြီး Execute လုပ်ရတယ်ဆိုတာကို ရိုက်ပြထားတယ်။ တစ်ချိန်က PDP စက်တွေဟာ အခုအချိန်မှာသုံးနေတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေ ဖြစ်လာဖို့အတွက် အတော်အရေးပါခဲ့တယ် ပထမဆုံး Unix ကို Ken Thompson က 1969 မှာ PDP-7 ပေါ်မှာရေးခဲ့တာပဲ။ ဒီခေတ်မှ ပရိုဂရမ်မာဖြစ်တာ အတော်ကံကောင်းတယ် အဲဒီ့ကွန်ပျူတာတွေခေတ်က ပရိုဂရမ်ရေးရတာ စက္ကူအတော်ကုန်မယ့် သဘောရှိတယ်။
PDP11 ကတော့ Download လုပ်ပြီးကြည့်ဖို့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ Paradigms ကတော့ အချိန်ယူရမယ်ထင်တယ်။
တခြားဟာတွေတော့ Youtube မှာနည်းနည်းမွှေနှောက်ရမယ်။
oh my! i wish my prof started with something like that. thanks man. here's my2cent.
microsoft PDC video series
* All free to watch, some of the videos are highly educational and gave insights that no textbooks can. Eg: how visual studio 2010 was built and the challenges and how some of them were solved.
Software Engineering Podcast (notavideo so may not qualify here?) (total of 170+ episodes discussing various aspects of software engineering)
* very good summaries and interviews with people who are doing the latest and greatest now. things like scala, nosql, c++0x or whatever the standards comm decides to call it. i think the discussions were very timely and it gives really helpful insights into things you feel like you have to know. it'savery good alternative to googling just to keep yourself updated.